Bruno Fernandes oo dib ugu laabtay Portugal kaddib markii uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay Manchester United – Gool FM
Bruno Fernandes oo dib ugu laabtay Portugal kaddib markii uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay Manchester United
(Lisbon) 03 Feb 2020. Saxiixa cusub ee kooxda Manchester United, Bruno Fernandes ayaa lagu arkay isagoo daawanaya kooxdiisii hore ee Sporting Lisbon wax ka yar 24 saacadood kaddib markii uu saftay kulankiisii ugu horreysay ee kooxda uu maamulo Ole Gunnar Solskjaer.
Red Devils ayaa dhawaan dhammeystirtay saxiixa xiddigii reer Portugal, kaasoo ku biiray kooxda 20-ka jeer haysata horyaalka Ingiriiska, isagoo heshiis kula jira ilaa xagaaga 2025-ka.
Fernandes waxa uu ciyaaray 90-ka daqiiqo ee buuxa kulankii Man United wajahday Wolverhampton Wanderers Sabtidii, laakiin kama uusan saacidin in kooxdiisa cusub gaarto guul, maadaama ay labada koox wadaageen min hal dhibco oo goolal la’aan ah.
Kooxda reer Ingriiska kulankooda ugu horreeya waxa ay ciyaari doonaan 17-ka bishan Febraayo marka ay u safraan Chelsea, waxaana Fernandes uu ku laabtay dalkiisa Portugal Axaddii si uu u daawado kooxdiisii hore ee Sporting.
Fernandes ayaa kaamirooyinku soo qabteen isagoo daawanaya kulankii Axadii ay Sporting la ciyaartay kooxda Braga, inkastoo khasaaro 1-0 ah ay ka soo gaartay kooxda reer Portugal ee uu goolka guusha u dhaliyay weeraryahanka dhawaan ku soo biiri doona Barcelona ee Francisco Trincao.
Man United ayaa bixisay lacag dhan 47 milyan oo gini si ay u xaqiijiso adeegga 25-sano jirkaan, laakiin heshiiska ayaa ugu dambayn u kici karaya 68 milyan oo gini, iyadoo loo eegayo wax qabadyada kala duwan ee ku saleysan qaab ciyaareedkiisa.
David Beckham oo doonaya inuu la soo wareego mid ka mid ah saddexda Weeraryahan ee ugu muhiimsan Barcelona… (Messi, Suarez mise Griezmann?)